အတွက် Cryptocurrency စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း 2018 - Blockchain သတင်းများ
ဇန္နဝါရီလ 7, 2018 admin
အတွက် Cryptocurrency စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း 2018
ကြောင့်အစဉ်အလာစတော့ရှယ်ယာဖလှယ်မှုအပေါ် Bitcoin အနာဂတ်နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ၏ပစ်လွှတ်ရန်; တစ်ဦးကျြောတည်ထောင်ခြင်း 100 cryptocurrencies ကုန်သွယ်မှုကြောင်းခြံရန်ပုံငွေများ; နှင့် cryptocurrency ဈေးကွက်အရင်းအနှီးထက်ပိုမိုရောက်ရှိ $500 ဘီလီယံ 2017, ကျွမ်းကျင်သူများကတရားမျှတစွာလက်ရှိ cryptomarket ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်များ၏အမြန်ဆုံးစိုက်ပျိုးမှုနှင့်အရှိဆုံးအလားအလာစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်လာသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်. ကျနော်တို့အတွက် cryptocurrency စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းကစားသမားများ၏အမြင်များနှင့်ဟောကိန်းများကိုစုဝေးစေကြပါပြီ 2018.
Node40 ၏ CEO ဖြစ်သူ, တစ်ဦး blockchain အုပ်ချုပ်မှုနှင့် cryptocurrency အခွန်လိုက်နာမှုကုမ္ပဏီ, ပယ်ရီ woodin ယုံကြည်သည် 2018 cryptocurrency များအတွက်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အများပြည်သူအသိပညာရာနှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်.
ဒါဟာတိုင်းမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသင်ရှိသည်မည်မျှသိရန်လိုပေမည်သည့်အခါတစ်နှစ်ဖြစ်မယ့်ဘယ်လိုဝယ်ယူရန်ဖြစ်ပါတယ်, woodin ပြောပါတယ်.
အဘယ်သူမျှမသံသယ cryptocurrencies သုံးပြီးလူများ၏အရေအတွက်မြင့်တက်လာရှိလိမ့်မည်. ယောနသန်သေလ, YouNow အားဖြင့်ကျားကန်၏ SVP စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, မီဒီယာဂေဟစနစ်တည်ဆောက်ရန် blockchain ကိုအသုံးပြုထားတဲ့, ၏အဆုံးအားဖြင့်ခန့်မှန်း 2018, ကျနော်တို့ကျော်မြင်ရပါလိမ့်မည် 50 သန်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူအနည်းဆုံး cryptocurrency ကိုင်ပြီး. လန်ဒန် Block ကိုချိန်းအားဖြင့်အသစ်သောသုတေသနနေစဉ် (LBX) ၏အဆုံးအားဖြင့်နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ် 2018 သုံးနှစ်တစ်ထောင်အတွက်တဦးတည်း crypto ဈေးကွက်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြလိမ့်မည်.
အနာဂတ်နဲ့ options ကန်ထရိုက် Bitcoin စာရင်းပြုစုရန်ရိုးရာစတော့ရှယ်ယာဖလှယ်မှု CBOE နှင့် CME ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး cryptocurrency လုပ်., ဖြစ်ကောင်းမကြာမီ, အခြားအ cryptocurrencies, အဖိုးတန်သတ္ထုဆင်တူသစ်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစား, စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ, အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ, နှင့်အခြားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်လုံခြုံရေး. ထို့ကြောင့်, လာမည့်နှစ်တွင် cryptocurrencies ၏အနေအထားကိုလက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာစနစ်ကပိုမိုတရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ. ရှိမုနျကိုယု, StormX ၏ CEO, ရှယ်ယာဒီကြေညာချက်. သူကသေချာဖြစ်ပါသည် 2018 cryptocurrency များအတွက်အကောင်းဆုံးအနှစ်တဦးဖြစ်အသစ်တစ်ခုအဆင့်အထိစျေးကွက်တွန်းပါလိမ့်မယ်.
ယခုတိုင်အောင် Bitcoin ၏စျေးနှုန်းတွန်းအားပေးအဓိကအားလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အခြား cryptocurrencies ခဲ့. တစ်အနာဂတ်စျေးကွက်နှင့်အန္တရာယ်ပရိုဖိုင်းကိုလျှော့ချဖို့ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ, ပိုပြီးအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနောက်ဆုံးတော့အတွက်ခုန် start နိုင်ပါလိမ့်မည်. သို့သော်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာနှင့်အတူ, ကျနော်တို့လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပိုက်ဆံစီးဆင်းမှုအတွက်ဒေါ်လာထရီလီယံကိုတွေ့မြင်နိုင်.
Shidan Gouran, ကမ္တာ့ Blockchain Technologies ကသမ္မတ, cryptocurrency အတွက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအပေါ် ပို. ပင်သိသာထင်ရှားသောအောင်မြင်မှုများမြင်ရပါလိမ့်မည်မသံသယရှိပါတယ် 2018.
“စားသုံးသူလူဦးရေရဲ့တစ်ဦးသိသိသာသာရာခိုင်နှုန်းအသုံးပြုနေသည်ဖြစ်စေနေစဉ်သို့မဟုတ်, အနည်းဆုံး, cryptocurrencies နှင့်အတူအဆင်ပြေ, တူသေးအစိုးရများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကပြောသည်မရနိုင်. ဒါဟာမျှော်လင့်ထားခံရဖို့ဖြစ်တယ်, အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်, အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကနှစ်ဦးစလုံး, နည်းပညာသစ်များချမှတ်အတွက်မဟုတ်တော့သင်ယူမှုခါးဆစ်ရှိသည်ဖို့လေ့. ငါတို့သည်ဤသင်ယူမှုကွေးအတွက် cryptocurrency နှင့် blockchain ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏ Focal Point သည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခံစား 2018, ဒီနယ်ပယ်ထဲမှာအများပြည်သူနှင့်အဖွဲ့အစည်းပါဝင်ပတ်သက်မှုတားဆီးဘူးသောအတားအဆီးများစွာကိုကျော်လွှား. ဒါဟာတူညီတဲ့စာမျက်နှာပေါ်ကိုလူတိုင်းဆောင်ခဲ့ဦးမည်, ကိုအလွန်သြဇာအဖွဲ့အစည်းများ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူဤအနည်းပညာများ၏အလားအလာတပုဒ်ကို, မဟုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သော့ဖွင့်လုပ်ဆောင်ချက်ကို. cryptocurrencies အတွက်ဆက်လက်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြား, Bitcoin-based အနာဂတ်၏ပူဇော်သက္ကာကို, နှင့်အစိုးရများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် blockchain စီမံကိန်းများအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်, အများပြည်သူနှင့်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်မှာပေါ်ဖမ်းသည်ဤနည်းပညာများလက္ခဏာတွေပြီးသားရှိပါတယ်. ကျွန်တော်တို့, ထိုကွောငျ့, ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်း 2018 စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ကလေးမွေးစားခြင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်, အသစ်သောသက်ဆိုင်သူများကြိုဆိုနေဖြင့်ယနေ့အထိတည်ဆဲတိုးတက်မှုအပေါ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း”.
Biddable မာကု Lurie ၏ CEO ဖြစ်သူအဆိုအရ, အများအပြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံအခြားရွေးချယ်စရာ cryptocurrencies အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်, litecoin အပါအဝင်, dash, နှင့် iota, အစား Bitcoin သို့မဟုတ်အီထက်. Lurie ရင်းနှီးမြှုပ်နှံယုံကြည်သည်, တွင် 2018, အဲဒီမှာကွဲပြားစုံလင်တဲ့ cryptoassets ဆီသို့တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့တွန်းအားပေးဖြစ်သွားနှင့် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရိုးရာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးကိုကြည့်လမ်းကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မည်.
သူ Mike ရောင်ခြည်, အဆိုပါ Crypto Company ၏ CEO ဖြစ်သူ, Bitcoin အတွက်လျော့နည်းမတည်ငြိမ်မှုကအခြားရွေးချယ်စရာ cryptocurrencies အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမည်ဟုနှင့်ငါတို့သည်လည်းအာမခံတိုကင်၏မြင့်တက်တွေ့မြင်မယ်လို့မှတ်ချက်ပြု. သူကတစ်ဦးကစျေးကွက်ဦးထုပ်ခန့်မှန်း $5 ယခုနှစ်အကုန်တွင်ထရီလီယံ.
dmitriy Zhulin, INS ဂေဟစနစ်၏ co-founder, အဖြစ် blockchain နည်းပညာပုံသဏ္ဍာန်ဆက်လက်မျှော်လင့်, Bitcoin ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထိကြီးထွားလိမ့်မယ် $30-40,000 တွင် 2018 ငွေပေးချေမှုနှင့်အရင်းအနှီးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်က၎င်း၏အဆင်ပြေစေရန်နှင့်နောက်ထပ်ကလေးမွေးစားခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး. ထို့အပြင်, Trevor Koverko, ကနေဒါကုမ္ပဏီ Polymath ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတ, Bitcoin တစ်ဦးငွေပေးချေမှုကွန်ယက်ကိုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နေ.
“လောလောဆယ် Bitcoin တန်ဖိုးကိုတစ်မှန်းဆပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်စတိုးဆိုင်အဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်. ဒါပေမယ့်လျှပ်စစ်ကွန်ရက်တစ်ခုနှင့်တူချုံ့ချဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေါ်ထွက်လာအဖြစ် ( Bitcoin-based ကွန်ယက်ကို, ကြောင်းအသုံးပြုသူများအ micropayments တစ်ခုန့်အသတ်အရေအတွက်ကလုပ်ခွင့်ပြု - တယ်လျောက်ပတ်စွာ), Bitcoin ရဲ့ utility ကိုသိသိသာသာင်း၏စျေးနှုန်းနှင့်အတူတိုးမြှင့်. အစစ်အမှန်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုက Bitcoin '' အဓိကကွင်းဆက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်’ ဤအဆင့်မြှင့်ချမှတ်ရန်သတ္တိရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ် Bitcoin ငွေကဲ့သို့အခြားသောကွင်းဆက်ဖွစျလိမျ့မညျ?”
Bitcoin Hardforks ကဘာလဲ?
လမ်းဆုံလမ်းခွကဘာလဲ? T က ...
Blockchain သတင်းများ 12 ဇန္နဝါရီလ 2018
တရုတ် search engine ...
Blockchain သတင်းများ 13 ဇန္နဝါရီလ 2018
Next Post:ဘယ်လို blockchain နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးပါဘူး 2018?
Blockchain သတင်းများ 16 ဇန္နဝါရီလ 2018
ကျနော်တို့ Cryptocurrency ဂရမ်ကြေးနန်း ICO အကြောင်းကိုသိပါကဘာလဲ
Blockchain သတင်းများ 15 ဇန္နဝါရီလ 2018
Blockchain သတင်းများ 11 ဇန္နဝါရီလ 2018
ဇန္နဝါရီလ 15, 2018 admin
Telegram ICO Telegram Founder Pavel Durov is going to launchablockchain,
ဇန္နဝါရီလ 11, 2018 admin
လမ်းဆုံလမ်းခွကဘာလဲ? The Bitcoin network has gone throughalot